ရှီက လူငယ်များနေ့ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Renmin တက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ(CPC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှီကျင့်ဖိန်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၅ ရက်တွင် ပေကျင်းမြို့ရှိ Renmin တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ(CPC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရှီကျင့်ဖိန်သည် မေ ၄ ရက်တွင် ကျရောက်မည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ “လူငယ်များနေ့”ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ယနေ့ ဧပြီ ၂၅ ရက်တွင် ပေကျင်းမြို့ရှိ Renmin တက္ကသိုလ် (Renmin University of China) သို့သွားရောက်လည်ပတ်ကာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှီသည် ယင်းတက္ကသိုလ်ရှိ တွေးခေါ်ယုံကြည်ချက်- နိုင်ငံရေးအသိပညာ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအကြောင်းအရာ သင်ကြားပို့ချပေးနေသည့် တွေးခေါ်ယုံကြည်ချက်- နိုင်ငံရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတစာသင်ခန်းတစ်ခုသို့သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရှီသည် ကျောင်း၏သမိုင်းကြောင်း ၊ ယင်း၏ သင်ကြားရေး နှင့် သုတေသနအပိုင်းအောင်မြင်မှုများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် တက္ကသိုလ်ပြတိုက် နှင့် စာကြည့်တိုက်သို့လည်း သွားရောက်ခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်း စာအုပ်စာပေများ နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာရေးသားချက်များ အသုံးပြုခြင်း နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပြင် သုသေတနရလဒ်များအား တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရှီကျင့်ဖိန်သည် ယင်းတက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာဆရာမများ နှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသားများနှင့်အတူ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးမှုတစ်ခုတွင် သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ (Xinhua)
Xi went to an intelligent classroom for ideological-political courses to learn about the reform and innovation of ideological-political education.
He went to the university’s museum and library to learn about the school’s history, its achievements in teaching and research, and efforts to protect and use literature and ancient books as well as to promote application of research results.
Xi then chairedasymposium with the university’s teachers and students.
ကမ္ဘာဂြိုဟ်အနီးရှိ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများအား စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ရေး စီစဉ်